Ny dikan'ny anarana Matvey. Secret of Matvey
Matvey dia anarana tsy dia fahita loatra, mety ho lasa tahaka ny lamaody toy ny anarana maro hafa. Amin'izao fotoana izao, matetika dia tsy misy mitondra an'io anarana io.
Matvey dia midika hoe avy amin'ny teny hebreo hoe "Dar DY", "Fanomezana an'Andriamanitra".
Ny niandohan'ny anarana Matvey:
Matvey - anarana hebreo, fantatra hatramin'ny taloha. Taloha dia nolazaina fa "Matthias".
Ny toetra sy ny fandikana ny anaran'i Matvey:
Hatramin'ny fahazazany, i Matvei dia mahatsapa ny tsy fitoviana misy eo amin'ny anarany. Satria ny feo dia mihomehy, ny ankizilahy dia matetika mamazivazy na maneso mihitsy. Izy io dia miaraka amin'ny fahasarotam-po momba ny tsy fahamendrehana amin'ny anarany, hiady amin'ny androm-piainany izy. Saingy ny angovo maivana dia hanampy azy handresy ny fanavakavahana ao amin'ny toerany. Ary ny endri-tarehy toy ny natiora tsara fa tsy mpanani-bohitra fotsiny dia manintona namana maro aminy.
Ity zaza ity ao an-trano dia lava lava. Nanantena ny ray aman-dreniny izy ireo. Matvey mitombo ny zaza matanjaka, matoria, tsy misy olona manelingelina ny katsahiny. Tsy afaka mahita ady amin'ny ankizilahy izy na mandeha an-tavy. Matemika dia marin-toetra: raha alefanao any amin'ny fivarotana, tony ianao - dia hitondra tanteraka ny fiovana. Mianatra any am-pianarana izy tsy misy fihazana manokana, fa amim-pahazotoana. Mivoatra, miasa toy izany - fa noho ny trosa, fa tsy noho ny faniriany.
Adult Matvey tsy manana ny zava-drehetra eo amin'ny fiainana. Noho ny fahamaotinana azy ireo dia tsy mitsangana eo amin'ny vahoaka izy ireo, fa tsy mpikarakara, fa manambony ihany. Miasa mangina amin'ny raharaham-barotra ataony izy ireo, fa tsy manantena zavatra ho setrin'izany. Tonga ny fotoana iray hiakaran'ny liona iray ao amin'ny fanahin'i Matvei, vonona ny hanararaotra azy izy, saingy amin'ny faharoa, tsy manadino fa vonona ny hanao asa mahagaga izy. Matvey tsy tia fifandirana sy adihevitra. Mety ho marary izy raha toa ka lasa mpandray anjara na vavolombelon'ny fifanoherana rehetra. Matveyi dia mpampihavana, tsy ho afaka hampitony azy izy, raha tsy mandritra ny fotoana fohy dia tsy mampihavana ny rehetra izy. Tsy mahatratra ny haavony eo amin'ny fiainany izy. Manetry tena sy manao ny marina izy, raha ampangaina ho mandainga, dia hanaporofo tsara ny asany ary tsy hialona ny olona mialona azy. Avy amin'ny Matio dia afaka manantena zavatra tsy hay lazaina ianao.
Matvei dia vahiny amin'ny asa. Matetika izy no mahazo fanabeazana faharoa ary tsy mitady hibata toerana ambony, noho izany dia ambany izy.
Ny fanambadian'i Matvei, izay matetika tsy sambatra, fa noho ny fifandraisana amin'ny zanaka, dia hiezaka ny hitazona ny fifandraisana amin'ny vadiny hatramin'ny farany. Matetika i Zhenya Matvei no miady amin'ny rafozambaviny, ary manahy azy be loatra izany. Raha nisara-panambadiana i Matvey, dia manambady ihany izy aorian'ny taona maro ary vehivavy iray no kely noho ny tenany.
Zavatra mahaliana momba ny anaran'i Matvey:
Ny anaran'i Matio no apôstôlin'ny faharoa ambin'ny folo an'i Kristy, izay niray tamin'ny kristianina hafa, nanoloana ny toerany teo amin'ny fiarahamonina.
Matvey amin'ny fiteny hafa:
Ny anarana Matvey amin'ny teny anglisy: Matio (Matio)
Ny anarana Matvey amin'ny teny sinoa: 瑪麗婭 (Math Wei)
Anarana amin'ny teny japoney: マ ト ヴ ェ イ (Matovai)
Ny anarana Matvey amin'ny teny Espaniôla: Matvey (Matvey)
Ny anarana Matvey amin'ny teny alemà: Matio (Matio)
Anarana amin'ny teny poloney: Matusz (Mathews)
Matvey amin'ny teny Okrainiana: Matvey
Endriky ny matoanteny amin'ny teny espaniola Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny espaniola Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny espaniola portogey Matoanteny amin'ny teny espaniola
Matvey - loko ny anarana : hazavana mavo
Ny vato Matvei : chiastolite
Ambasady any Soisa
Masoivohon'i Tanzania any Kazakhstan
Ambasadin'i Afrika Atsimo ao Belarosia
Ireo olona nihaona tamin'i Maria Virjiny dia misy!
Masoivohon'i Tanzania any Okraina
Barbaris - toetra mahasoa
Ny mpankafy dia tsy nankasitraka ny fanatanjahan-tena avy amin'i Jessica Biel, fa nankasitraka ilay mpilalao sarimihetsika
Pinda mangatsiatsiaka "Panda" - kilasy maoderina
Сlasna - ririnina 2016-2017
Sakafo miaraka amin'ny vary - recipe
Tavy mena - loza sy tombotsoa
Ny astrolojia indianina
Fanasana ao amin'ny lalantsara misy seza
Inona no fampisehoana mifidy ny lakozia?
Village of Raska Gora
Modely hoditra 2016